Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Wout Weghorst Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Anyị Wout Weghorst Biography na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, ndụ mmalite, nne na nna - Astrid Weghorst (Mama), Frans Weghorst (Papa), Brothers (Niek, Twan na Ralf) na ndụ ezinụlọ.
Ọ naghị akwụsị ebe ahụ, anyị ga-agwa gị Eziokwu gbasara nwunye onye ọkpọ Dutch (Nikki Van Esch), ụmụ nwanyị, ụdị ndụ, ndụ onwe onye na Net Worth, wdg.
Na nkenke, Bio a bụ maka Full Life History of Wout Weghorst. A na-akpọkarị ya Jamie Vardy nke Netherlands, Wout bụ onye bilitere site na omimi nke ọchịchịrị football.
Nke a bụ akụkọ gbasara ndị na-agba bọọlụ nwere ihe nketa ezinụlọ bara ụba. Ezinụlọ nke ji mmanụ na gas wulite akụ ya. Ọ dịghị onye òtù Wout Weghorst ma e wezụga ya hụrụ ohere nke ọdịnihu na football.
N'ezie, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla chere na ọ gaghị eme ya na football, ọbụna ndị ezinụlọ ya. Nke a bụ n'ihi na Wout, na mbụ, adịghị mma na egwuregwu ahụ. O were njikọ nne na nna ya (site na mama ya) iji mee ka ọ gaa ebe dị elu. Kemgbe ahụ, Baller enweghị ndakpọ olileanya.
Iji mee ka akụkọ ndụ gị nwee agụụ maka itinye aka nke Wout Weghorst's Bio, anyị agagoro n'ihu igosi kpakpando Dutch Early Life and Rise Gallery. Foto a intro na-akọwa njem ndụ nke Dutch Football Giant.
Wout Weghorst Biography - Lee ndụ mmalite ya na akụkọ ịga nke ọma ya.
Ee, ndị niile na-agba bọl na-ahụ n'anya n'ịgba akara, na onye na-egwu Dutch nke nwere elu nke 6 ụkwụ 6 sentimita na-eme nke ahụ na mgbakwunye. Maka ndị Netherlands na-aga n'ihu, ihe mgbaru ọsọ ọ bụla ọ na-enweta bụ ihe na-adịghị mma EE n'ihu otu puku NOES ọ nwetara na njem ndụ ya.
N'agbanyeghị otuto gbara obi ike ya n'ihu goolu, anyị na-ahụ oghere. Na ọ bụghị ọtụtụ ndị na-akwado bọọlụ agụọla ụdị omimi nke Wout Weghorst's Biography. Nke a bụ ihe mere anyị ji kwadobe ihe ncheta a. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Akụkọ nwata Wout Weghorst:
Maka ndị mbido biography, ọ nwere aha otutu - Die Wolfe (nke pụtara anụ ọhịa wolf na German). A mụrụ Wout Weghorst na 7th ụbọchị nke August 1992 na nne ya, Astrid Weghorst na Nna, Frans Weghorst, na Borne, Netherlands.
N'ime ụmụaka niile Astrid, ịtụrụ ime Wout pụtara dị iche iche. N'ikpe ikpe site n'ụzọ ọ na-agba, nne ya na-enwe mmetụta a mgbe nile na ọ na-ebu onye na-agba ụkwụ n'afọ ya.
Mgbe a mụrụ Wout, nne na nna ya na ụmụnne ya abụọ hụrụ omume ọzọ. Nchọpụta ahụ mere n'oge ọ malitere ije ije.
Na mbido, Wout nwere mmasị ịkpọrọ akwa akwa ya ma gbapụ ha na steepụ. Ka ọ na-eme nke ahụ, ọ dịghị onye maara na nwa okoro ahụ na-ekpo ọkụ nanị maka ọdịnihu n'ihu ya.
Ndụ mmalite na afọ ntolite:
Wout Weghorst bịara n'ụwa, ọ bụghị dị ka onye mbụ, kama dị ka nwa nke atọ nke ezinụlọ ya. Nke a bụ ezinụlọ nwere ndị agha anọ (ụmụ nwoke niile). Site na nyocha anyị, Wout Weghorst enweghị ụmụnne nwanyị. Aha nwanne ya nwoke bụ Niek Weghorst, Twan Weghorst, na Ralf Weghorst.
Na foto dị n'okpuru ebe a, nwanne Wout Weghorst nke okenye, Twan Weghorst, nọ n'aka ekpe. Ralf Weghorst, onye tọrọ ya, nọ n'aka nri aka nri. Wout yi uwe polo ọcha n'etiti. N'ikpeazụ, nwa nke ezinụlọ (Niek Weghorst) na-ebu Twan na igwe igwe.
Zute ụmụnne Wout Weghorst (Niek, Twan na Ralf) n'oge ha bụ nwata.
Dịka e sere n’elu, a mụrụ ụmụaka niile n’ihi njikọ alụmdi na nwunye na-enye obi ụtọ n’etiti nne na nna ha, Astrid na Frans Weghorst. Lee, ndị ahụ kpọbatara Twan, Ralf, Wout na Neik n’ụwa nke a. Na onye nyere ụmụ ha aha mkpụrụedemede anọ.
Ndị nne na nna Wout Weghorst - Frans Weghorst (Nna ya) na Astrid Wegnorst (Nne ya).
Ihe ndabere Ezinụlọ Wout Weghorst:
Eziokwu ka bụ na onye egwuregwu bọọlụ Dutch sitere na ezinụlọ bara ọgaranya, nke ndị otu ya kwụsiri ike n'ụzọ ego. Ndị nne na nna Wout Weghorst na-azụ ahịa mmanụ na gas. Ha so n’ezinụlọ ndị kasị baa ọgaranya na Borne, Netherlands.
Azụmahịa ezinụlọ Wout Weghorst:
Avia bụ aha ụlọ ọrụ mmanụ na gas. Na ụlọ ọrụ nke na-eme mmanụ ọkụ na gas na-ere ahịa na ịzụ ahịa adịla kemgbe ọtụtụ ọgbọ. Dịka nke 2021, ezinụlọ Wout Weghorst nwere ihe dị ka ọdụ ụgbọ ala 130 naanị na Netherlands.
Ọ na-abụ ihe gbasara ezinụlọ ya mgbe niile:
Isi ihe ọzọ ị ga-amata gbasara Wout Weghorst Family bụ na ha nwere njikọ chiri anya. Astrid Weghorst na Frans Weghorst (nne na nna ya) haziri ndụ ụmụ ha nwoke site na nwata.
N'etiti ụmụnne ya, Wout dị nnọọ iche. Ọ dị iche n'akụkụ nke ọchịchọ ndụ ya. N'ihi nke ahụ, ọ n'ihi na a ibu isiokwu mmasị nne ya (Astrid).
Astrid Weghorst nwere Wout - n'ime afọ nwata ya.
Tupu anyị abanye n'ime ihe mere ka ọ dị iche, ka anyị gwa gị ntakịrị banyere mgbọrọgwụ Dutch nke Footballer yana agụmakwụkwọ ya.
Ezinụlọ Wout Weghorst:
Obodo onye Striker bụ Netherlands. N’ebe ọwụwa anyanwụ nke Netherlands dịkwa Borne, bụ́ obodo nwere ihe dị ka mmadụ 23,000 bi.
Obodo a, na mpaghara Overijssel nke Netherland, bụ ebe Wout Weghorst sitere na ezinụlọ ya.
Borne bụ obodo dị na mpaghara Twente yana nso ókèala German. Ndị obodo a nwere aha otutu, Melbulu.
Ruo mmalite nke afọ mmepụta ihe, mmalite Wout, Borne, bụ obodo ọrụ ugbo, nke ejirikarị ala plaggen na oke ehi mara ya.
Wout Weghorst so na ndị ama ama si n'obodo ezinụlọ ya bụ Borne, Overijssel.
Agbụrụ Wout Weghorst:
Site n'echiche agbụrụ, ezinụlọ Wout Weghorst na-ejikọta onwe ha na olumba Dutch Low Saxon.
Nke a bụ otu na-asụ Dutch sitere na West Germany. A ka na-asụ asụsụ ahụ, mana ọnụ ọgụgụ ndị na-asụ ya na-ebelata.
Map a na-akọwa agbụrụ Wout Weghorst.
N'oge ochie, Lower Saxony nwere ọtụtụ ndị agbụrụ German. N'okpuru nduzi nke Duke Widukind, ha tinyere aka na ọtụtụ esemokwu akụkọ ifo na Charlemagne, na njedebe narị afọ nke asatọ.
Mmụta Wout Weghorst:
Ụlọ akwụkwọ, maka Dutch Superstar, malitere site n'ụlọ ezinụlọ ya. Nne na nna Wout Weghorst bụ ndị nkuzi mbụ ya, ha nwekwara oke ọrụ n'ịkpụzi agwa ya.
Maka ndị Dutch, echiche nke ịga ụlọ akwụkwọ bụ Atụmatụ B ya karịa A. Atụmatụ A abụghị ihe ọzọ karịa ọchịchọ ịghọ ndị na-agba ụkwụ.
Mgbe ya na ndị mụrụ ya kwekọrịtara, Wout hụrụ na ọ dịghị mgbe ọ ga-emechu ha ihu n'ihe gbasara ịga ụlọ akwụkwọ. Onye egwuregwu bọọlụ Dutch gụrụ akwụkwọ na Holland ruo ọkwa mahadum. Ọchịchọ Baller maka agụmakwụkwọ yiri nke ahụ Mikel Oyarzabal, onye egwuregwu bọọlụ Spen.
Dịka nyocha anyị siri kwuo, Wout nwere ogo mahadum abụọ. Nke mbụ bụ nzere na nchịkwa azụmahịa. Echiche Wout maka nkuzi a bịara n'ihi mkpa ọ dị iji ihe ọmụma nchịkwa azụmahịa na azụmaahịa mmanụ na gas nke ezinụlọ.
Nzere nzere bachelọ nke abụọ nke Striker nwere mmasị na ọrụ bọọlụ ya. N'ọkwa mahadum, Wout nwetara nzere na Top Sports Management and Entrepreneurship.
Tupu ekweta ịkụzi onwe ya ruo ọkwa mahadum, e nwere nghọtahie ya na papa ya na mama ya. Ọ tụrụ Astrid na Frans n'anya maka ihe Wout chọrọ ime ná ndụ. Ọ gwara ha na ya chọrọ ịbụ ndị na-agba bọl - megide ọchịchọ nke nne na nna ya.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ nweghị onye ezinaụlọ Wout Weghorst gbara bọọlụ nke ọma. Ndị mụrụ ya chọkwara ka ụmụ ha na-arụ ọrụ ndị ọzọ. Karịsịa nke dabara na azụmahịa ezinụlọ ma ọ bụ nke a na-ewere dị ka ihe a ma ama.
N'ịgbalị ịnweta ihe ụmụ ha nwoke (Twan, Ralf, Wout na Niek) chọrọ ime na ndụ, nzaghachi nwa ha nke atọ nwetara Astrid na Frans nwere nchegbu.
Ndị nne na nna Wout Weghorst nwere nchegbu na ya (nwa ha nke atọ) na-achụ nrọ na-agaghị ekwe omume. Obi adịghị ha mma n'echiche ya nke ịchọ ịghọ ọkachamara n'egwuregwu bọọlụ. Kama, ha gwara ya ka o chegharịa echiche.
Papa Wout Weghorst na mama m gbara ya ume ka o chee echiche ọzọ. Ọrụ nwere ezi uche karịa, karịa football. Astrid na Nna, Frans Weghorst chere na Wout kwesịrị ịgbaso ọrụ ụmụnna ya ndị tọrọ ya họọrọ ịrụ.
Ọ dị mkpa ịmara na nwa mbụ nke ezinụlọ (Twan) ekpebiela n'obi ya ịchọ ịghọ onye ọkwọ ụgbọ elu. Ralf họọrọ ịbụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Nwa nke ụlọ (Niek) kwetara iwere nkuzi dabara na azụmahịa ezinụlọ.
N'ikpeazụ, Wout chọtara ụzọ ya. O siri ike ịbụ onye egwuregwu bọọlụ - nke o kwere nkwa. Nwa nwoke ahụ nwere ọgụgụ isi mesiri ndị mụrụ ya obi ike ịga akwụkwọ. N'ihi ya, o nwetara ogo abụọ.
Akụkọ bọọlụ Wout Weghorst:
Dị ka e kwuru na mbụ, Baller na-achọsi ike ekwenyeghị na ndị mụrụ ya n'ihe gbasara nhọrọ ọrụ. Wout jigidere nkwenkwe ya - na ọ ga-agbaso ụzọ iji bụrụ ndị ọkachamara ọkachamara.
Ọbụna itinye aka nke ndị nwere ezi obi (bụ́ ndị ezinụlọ ya na-akpachi anya) enyeghị aka n'okwu ahụ. N'okwu nke Wout;
Ọtụtụ ndị nwere ezi ihe n’obi gbara m ume ịkwụsị football.
"Ha gwara m, 'Chefuo football - ị naghị mma',"
Ndị a bụ okwu Wout Weghorst - n'oge mkparịta ụka ya na Wolfsburger Allgemeine Zeitung.
Ka ọ jụrụ ndụmọdụ ha, echiche a bịara banyere ya. Ọtụtụ ndị mmadụ kpadoro nraranye Wout nye bọọlụ dị ka aghụghọ.
Nke a bụ nanị n'ihi na ọ machaghị n'egwuregwu ahụ. Otu ihe mere ka Wout na-aga n'ihu bụ echiche ya pụtara ìhè. Ọzọkwa, ọ dịghị mgbe ọ daa mbà n'obi n'ọchịchọ ya imeziwanye dị ka onye na-eto eto football.
Wout Weghorst Ndụ Ndụ - Afọ na Ụlọ Akwụkwọ:
Wout Weghorst malitere site n'ịgba egwu na ọkwa onye na-amu amu na ndị otu mpaghara ya, NEO.
Mgbe ahụ, n'ezie o yighị ka ọ ga-eme ka ọ dị anya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Wout bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kachasị njọ n'etiti ndị otu ya. N'agbanyeghị nke ahụ, onye na-eto eto kwenyere mgbe nile na o nwetara ihe ọ ga-eme iji mee ya na egwuregwu ahụ.
Wout Weghorst Early Years na agụmakwụkwọ football. Ị nwere ike ịmata ya?
Ntụkwasị obi bụ, Wout Weghorst's nkwenye onwe ya ime ya na football bịara n'oge ọ dịghị onye na-ekerịta obi ike ya.
N'oge ụfọdụ, nne na nna ya (ọkachasị mama ya, Astrid Weghorst) malitere ịkwado na ịchọta ụzọ isi nyere ya aka n'ọchịchọ football ya.
Akụkọ ndụ Wout Weghorst - Ụzọ maka akụkọ a ma ama:
Mgbe ọ na-egwu bọọlụ amateur na NEO na emesia na DETO (2010 ruo 20211), Wout (ọzọ) adịkwaghị ka Superstar kacha mma. N'ezie, oge egwuregwu mbụ ya yiri nke Denzel Dumfries. Ha abụọ nwere mmasị mana ha adịghị mma na football.
N'oge a, Wout na-egwuri egwu maka DETO Twenterand academy, nke ndị otu ya na-egwuri egwu n'akụkụ nke anọ nke Dutch football. Dịka Jamie Vardy, naanị ihe ọ chọrọ bụ ụzọ mgbago elu. Ọ dabara nke ọma, nke ahụ sitere na njikọ sitere n'aka nne na nna Wout Weghorst (Nne ya).
Ka njikọ ezinụlọ siri nye ya nkwalite:
Nwata lekwasịrị anya n'egwuregwu bọọlụ chọrọ nnukwu ụlọ ọgbakọ n'agbanyeghị na ọ dabara ọkwa nka iji gafee ule bọọlụ.
Dị ka chi ga-esi nweta ya, Wout Weghorst nwetara onwe ya na Willem II Tilburg, ụlọ egwuregwu bọọlụ Dutch na Tilburg. Nke ahụ agaraghị eme ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka njikọ ezinụlọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka nne ya ọ hụrụ n'anya (Astrid).
N'ụzọ dị mma, nne Wout Weghorst (Astrid) bụ enyi na nwunye Jan van Esch, onye nduzi nke Willem II mgbe ahụ. Mgbe ọ bụla ọ zutere ndị enyi ya, ha na-ekwurịta banyere ụmụ ha.
Mgbe ha na-ekwu okwu, Astrid Weghorst (Wout's Mum) na-ekwu okwu ọma mgbe niile banyere ọchịchọ football nwa ya nwoke. Nke ahụ mere ka enyi ya nwee nnọọ mmasị n'echiche nwa okorobịa ahụ. Dịka ụzọ isi nye nwa nwoke ahụ oke ya, ọ gwara di ya gbasara nwa enyi ya a na-akpọ Wout.
N'ịbụ onye sitere n'ike mmụọ nsọ, Jan van Esch (di enyi Astrid) kpebiri iziga ndị nlegharị anya ka ha lelee nwa ya nwoke. Akụkọ scouting na Wout Weghorst emechughị ihu. Ọ pụta nke ọma. Nke ahụ bụ ka Wout siri gaa na otu Eredivisie Willem II.
Ihe ịma aka nkeonwe:
Maka kpakpando Dutch, ịnọnyere ndị otu ọhụrụ bịara na ihe ịma aka ọhụrụ. Ọ bụghị naanị maka mkpa ọ dị imeziwanye egwuregwu egwuregwu ya. Wout malitere ịta ahụhụ site na uto uto. Ọganihu dị elu ya - n'oge ọ dị afọ iri na ụma - butere mpe mpe mpe mpe akwa ya.
"Enwere m nsogbu ịhazigharị ụkwụ m,"
Onye ọkpọ ọkpọ ahụ dị gịrịgịrị, kwuru otu oge na N'ajụjụ ọnụ ya na akwụkwọ akụkọ Freunde 11.
Mgbe njem ahụ siri ike:
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Willem II academy, ndị nlekọta ụlọ ọrụ ahụghị Wout ruru eru iso ndị otu egwuregwu mbụ.
N'agbanyeghị na e nyere Wout ohere ịbanye n'òtù mbụ ya, ọ dịghị mgbe Wout mebiri. Nke ahụ kpasuru ọgbakọ ahụ iwe.
N'ihi ya, ha na-eresị ya ndị nwere mmasị. Ha rere Wout nye FC Emmen, akụkụ nkewa Dutch dị ala. Klọb a n'oge ahụ na-egwuri egwu na mpaghara ala Netherland football.
Afọ agụmakwụkwọ ikpeazụ:
Ihe mgbaru ọsọ iri na abụọ na oge mbụ ya mere ka ọ kwaga Heracles Almelo, ebe Peter Bosz na-azụ ọzụzụ.
Maka Wout, iso ndị ọkachamara n'ọkwa dị elu egwuri egwu bụ ihe iju, bụrụkwa ihe mmeghe anya na-adịghị mma. Onye na-agba bọọlụ Dutch hụrụ na ihe niile na-aga ngwa ngwa maka mmasị ya.
Ka o sina dị, Weghorst adaghị mbà. N'agbanyeghị na a gọziri ya na nkà okike dị obere karịa ndị egwuregwu bọọlụ gbara ya gburugburu.
N'ime ụbọchị, naanị ihe ọ mere bụ ịchọta ụzọ ọ ga-esi meziwanye egwuregwu ya. N'ime oge ahụ, Wout nwere nyocha onwe ya nke ọma ma nweekwa oge ọzụzụ.
Ihe ịma aka ndị ọzọ:
Mgbe ọ chọrọ oge iji gosipụta uru ya, ha bịara ọtụtụ ndị nwere obi abụọ bụ ndị jụrụ ajụjụ banyere egwuregwu ya.
Wout ka na-egwu bọl amateur na 20 na e nwere ọtụtụ ndị otu egwuregwu na-egwu egwuregwu ahụ - ọzọ maka ntụrụndụ. Ndị a bụ ndị egwuregwu bọọlụ (karịsịa ndị otu ya) bụ ndị na-aga oriri na nkwari na mgbede Fraịde.
Maka Wout, ihe mgbaru ọsọ ya bụ ịkwanye ike na ịghọ ọkachamara. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mfe, ọ bụ onye na-adị njikere mgbe nile ịrụ ọrụ n'onwe ya. N'okwu ya…
Ọ dịghị mgbe m chere na m gaghị emeli ya.
Nne na nna m kwuru na m kwesịkwara ịhụ ihe m chọrọ ime ma ọ bụrụ na ọ gaghị aga.
Ma, m na-ekwukarị, sị: ‘Ee e, apụrụ m ime ya ma bụrụ ezigbo ọkachamara!
Ụfọdụ ndị Fans klọb enweghị mmasị na ya:
Daalụ maka nraranye, ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ sochiri. N'afọ 2015, Wout nwere obi ụtọ na AZ Alkmaar bịanyere aka na ya na Eredivisie.
Ọbụna n'oge a, ụfọdụ Fans ka na-enwe obi abụọ banyere ya. Ha boro ya ebubo na ọ bụ onye na-adịghị mma maka mmasị nke football Dutch. Ọtụtụ ndị na-akwado AZ kwuru na ya nwere ọtụtụ ike ike - nke na-abụghị ihe ha chọrọ dị ka onye ọkpọ.
Akụkụ a nke ndị fan kwuru na ha na-ahọrọ ndị na-akụ ha ka ọ bụrụ ngwa ngwa na aghụghọ. Ma ọ bụ ịbụ onye egwuregwu bọọlụ mara mma - na Dennis Bergkamp ebu. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ndị Fans a nwetara ngwa ngwa ngwa ngwa - na onye Myron Boadu.
Nke bụ eziokwu bụ na usoro Weghorst na-eme ochie, n'ụzọ dị iche, emeghị ka ndị na-akwado ya na-agba ọsọ.
Iji mee ka okwu ka njọ, iwe Wout n'ọgbọ egwuregwu nwetara ọtụtụ anabataghị ya. Ọ bụ ya bụ ụdị ndị na-akpatakarị ọgba aghara n'ọhịa. Onye na-egwu Dutch na-arụrịta ụka mgbe ụfọdụ na ndị na-ekpe ikpe, ndị mmegide, na ọbụna ndị nkụzi.
Wout Weghorst Bio - Akụkọ ịga nke ọma:
Obi dị m ụtọ, ndị egwuregwu Dutch malitere oge 2017-18 na ụdị mara mma. Wout meriri goolu iri abụọ na itoolu n'asọmpi niile.
Omume dị otú ahụ mere ka ọ kpọọ oku mba ofesi mbụ ya. Ọ bụ ya Ronald Koeman si Ndị otu Dutch mbụ nke March 2018.
Ọzọ, iji mechie ndị nkatọ ya, Wout Weghorst gụchara oge ahụ dị ka onye na-emekọ ihe ọnụ na nke atọ na Eredivisie.
O nwere ihe mgbaru ọsọ 18 - njikọ ya na Steven Berghuis. Ha abụọ nọ n'azụ ndị isi akara - Alireza Jahanbakhsh (ya na 21) na onye gbara ọsọ Bjørn Johnsen (ya na 19).
Ndị na-akwado Az, bụ ndị katọrọ ya nke ukwuu, malitere ịhụ nwoke ha n'anya ka o nyechara ha goolu ndị a.
Oku German Die Wölfe:
Naanị izu abụọ ka 2018 FIFA World Cup gasịrị, VfL Wolfsburg kwupụtara mbinye aka nke Wout Weghorst na nkwekọrịta afọ anọ.
Onye isi egwuregwu Wolfsburg - Olaf Rebbe - chọrọ inweta Wout mgbe mgbasa ozi ya rụpụtara ihe mgbaru ọsọ 18 maka Alkmaar (AZ). Nke a bụ vidiyo nke mmechuihu mmetụta uche ya nye ndị na-akwado AZ.
Ịbanye VfL Wolfsburg pụtara ịhapụ ndị mụrụ ya na ụmụnne ya maka oge mbụ. N'ụbọchị 16th nke Machị 2019, Wout meriri okpu mbụ ya maka ekike German.
Site n'ime nke ahụ, ọ ghọrọ onye nke mbụ site n'aka onye ọ bụla na-egwu maka klọb kemgbe Mario Gómez n'April 2017.
Ịbanye na nnukwu aha:
Iji gwa nkwa ya n'ụdị dị elu, Wout ji ihe mgbaru ọsọ iri na asaa mechaa oge Wolfsburg mbụ ya. Dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a, ọ jikọtara ya na aha ise maka otu ihe mgbaru ọsọ.
Aha na-agụnye ndị nke Andrej Kramaric, Kai Havertz, Luke Jovic na Marco Reus.
naanị Paco Alcacer (BVB) na Robert Lewandowski (Bayern Munich) nyere goolu karịa Wout Weghorst. Ka oge na-aga, onye ọkpụkpọ Dutch n'ụdị ọrụ 'onye lekwasịrị anya' nọgidere na-arụpụta nlọghachi mgbaru ọsọ dị egwu karị.
Obi abụọ adịghị ya, Weghorst egosila ụwa ihe. Na nnukwu akụkụ nke inwe na inwe obi ike bụ ikwere na onwe ya.
Ngoli nke ndị egwuregwu bọọlụ Dutch n'ọgba bọọlụ dị elu dị ka akụkọ Jamie Vardy. Ọ bụghị ihe ijuanya ndị egwuregwu na-akpọ ya ogologo Holland, chunkier azịza Leicester. N'ihi mama ya na ndị ọzọ guzoro n'akụkụ ya, Wout mechara mezuo nrọ football ya.
AN'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị abụ onye ọkpụkpọ nwere nkà ịgba bọọlụ kachasị site na mmalite. O nwere nnukwu echiche ma merie n'ọgụ ahụ n'ọtụtụ nsogbu ndị a kpakọtara megide ya. Ndị ọzọ Bio ya bụ akụkọ ihe mere eme.
Akụkụ a nke Bio ya na-agwa gị ozi gbasara ndụ ịhụnanya ya. N'ebe a, ị ga-ahụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara enyi nwanyị Wout Weghorst. Ọzọkwa, ọnọdụ mmekọrịta ya ugbu a.
N'afọ 2011, mgbe ọ ka na-egwu bọlbụ ụlọ akwụkwọ, Wout nwere ịhụnanya. Kpọmkwem na August 2011, ọ malitere ịlụ otu nwanyị aha ya bụ Nikki Van Esch. Ugbu a, ka anyị kọwakwuo gị maka obi ụtọ nke Striker na nwata.
Banyere Nikki Van Esch - enyi nwanyị Wout Weghorst:
Ọ bụ ya kacha amụmụmụ ọnụ ọchị ya. Karịsịa n'ihu nsogbu ọrụ ya. Wout na Nikki malitere mmekọrịta ha na August 2011. Ha na-anọkọ ọnụ kemgbe ihe karịrị afọ iri.
Nikki na-enye ya obi ụtọ. O mere ka ọ ghara ịkwụsị football. Kama, chere ka ọrụ ebube ya mee. Nikki Van Esch ka bụ nwanyị nke nrọ Wout.
Nikki Van Esch gụrụ akwụkwọ nke ukwuu, nwanyị mara mma na ụbụrụ. Dị ka nyocha, ọ gara Nantong Textile & Vocational Technology College. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ teknụzụ dị na Nantong, China.
N'ịga n'ihu, Nikki Van Esch debara aha na Mahadum Saxion nke Sayensị Ngwa. Ọ gụchara nzere bachelọ na Program Textile Engineering and Management.
Nikki van Esch bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ ejiji na akwa. Na Netherlands na Germany, WAG bụ onye ama ama maka ịbụ onye mmekọ ogologo oge nke Wout Weghorst.
Dịka di ya (Wout), Nikki Van Esch nwere mba Dutch. A mụrụ ya na Netherlands na akara zodiac ya bụ Aquarius. Ya na ezinụlọ ya dị ezigbo nso ma nwee otu nwanne, nwanne nwanyị aha ya bụ Dide van Esch.
Ụmụ Wout Weghorst:
Na Nikki Van Esch's Instagram Bio, ọ kọwara onwe ya dị ka mama nke Juul na Lucie. Ndị a bụ ụmụ Wout Weghorst. A mụrụ nwa mbụ ya (Juul) na 17th ụbọchị nke August 2018.
Wout na Nikki kpebiri ichere afọ abụọ ọzọ tupu ha agbakwunye onye ọzọ na ezinụlọ ha. N'ụbọchị 17th nke Eprel 2020, ha ghọrọ nne na nna nke nwa agbọghọ ọzọ, Lucie Mary Jo. Lee ndị hụrụ n'anya (Wout na Nikki) na ụmụ ha nwanyị.
Ezinụlọ Wout Weghorst bụ maka ịhụnanya.
Mgbe Nikki Van Esch mechara bụrụ nwunye Wout Weghorst:
Mgbe afọ 10 nke ịnọkọ ọnụ, aghaghị m ịjụ gị: kedu ka mụ na gị siri nọrọ?
Mgbe afọ iri nọrọ ọnụ, Wout tụrụ aro ka Nikki Van Esch.
Ndị a bụ okwu Wout Weghorst gwara ndị na-akwado ya ka ọ na-akọ atụmatụ ọ gwara ezigbo enyi ya nke afọ 10. Ọ jụrụ Nikki Van Esch aka na alụmdi na nwunye kpọmkwem na 28th nke August 2021. Kedu ụzọ isi mee ememe afọ iri nke akụkọ ịhụnanya ha!
Ndụ onwe onye Wout Weghorst:
Apụ na football, ihe mbụ ị ga-achọpụta banyere onye na-atụ bọmbụ Holland bụ eziokwu na ọ bụ Super Dad. Wout bụ ezigbo nna nke nwere akara ya na ụmụ ya nwanyị - maka oge ndụ ya niile.
Wout Ụmụaka ndị dị arọ na-enwe mmetụta dị mma nke nna ha na ndụ ha.
N'okpuru ebe a bụ otu n'ime oge nna na nwa nwanyị - ihe ịrịba ama na Wout bụ ezigbo nna. Vidio nke ịhụnanya nna.
N'ụlọ ezinụlọ ya, a na-enwekarị ọnụ ụlọ dị iche. Wout na-ehi ụra n'ebe ahụ naanị ya, ọkachasị n'abalị atọ gara aga tupu nnukwu egwuregwu.
Onye na-egbu Dutch bụ ụdị nke na-amasị ụra na-adịghị akwụsị akwụsị. Karịsịa site na ụmụ ya nwanyị (Juul na Lucie) bụ ndị na-achọ mgbe ụfọdụ nlebara anya Nikki n'abalị. Mgbe Wout na-ehi ụra nke ọma, o yikarịrị ka ọ ga-eme nke ọma na pitch.
Ọ naghị agba bọọlụ maka ego:
Wout Weghorst sitere na ezinụlọ bara ọgaranya. Akụ na ụba nke nne na nna ya (Astrid na Frans Weghorst) ezuola ka nwunye ya na ụmụ ya dị ndụ ruo ogologo oge.
Onye ọkpọ 6 ụkwụ 6 bụ ezigbo onye na-anụ ọkụ n'obi. Ọ bụ onye na-anaghị agba bọọlụ maka ego ya. Kama, maka mmanya ma ọ bụ mpako na nsọpụrụ.
Na Jenụwarị 2016, na-elele akaụntụ akụ abụba, Wout n'onwe ya jụrụ nnukwu ego sitere na Cardiff. Ya onwe ya wepụrụ plọg ahụ na mkparịta ụka nkwekọrịta n'ihi na ọ chọghị ịchụ ego.
Ọ dịghị mgbe ọ na-aṅụ mmanya ma ọ bụ na-aga klọb:
Wout, nwere àgwà dị nnọọ iche n'ebe ndụ nọ. Laa azụ n'oge, ndị otu ya na NEO na-agakarị oriri na ọṅụṅụ, ụbọchị tupu egwuregwu. Ọ na-akwụsị ịga oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ klọb.
Dutch Baller nọgidere na-eguzosi ike n'ezi ihe n'agbanyeghị na a gọziri ya na nkà dị nnọọ ala karịa ndị gbara ya gburugburu. Wout nwere echiche imekwu mgbanwe. Ọ naghị eme nyocha onwe onye miri emi - na nkwenye na ọ ga-emezi egwuregwu ya.
Ọ dị mpako maka ihe ọ kwenyere na ọ bụ ihe na-ezighị ezi:
Na pitch, Wout bụ ụdị nke na-enwekarị mmasị ịrụ ụka na ndị na-agba akwụkwọ na ndị mmegide. Ọ na-adị ngwa ikwu uche ya. Mgbe ụfọdụ, ya na ndị nkuzi na-arụrịta ụka.
Ọ bụrụ na mmadụ emeghị ya nke ọma, ọ ga-agwa ha ozugbo n'ihu ha. N'ime ụbọchị Emmen U-21 ya, Wout mere mkpesa n'ihu ọha banyere ikpe na-ezighị ezi nri. Ọ rụrụ ụka banyere nri tupu egwuregwu ahụ nke nwere burgers, bọọlụ nduku amịpụtara na ọkụkọ e ghere eghe.
N'ihi na o nwere ọchịchọ na-eto eto, onye na-agba ọsọ Dutch na-eleba anya mgbe niile banyere nri ya. Ọzọkwa, ọ na-emekwu ọzụzụ ọzụzụ na vidiyo nke onwe ya kwa ụbọchị. Ndị Baller na-ekiri vidiyo ndị a (na ndị ọzọ) ka ha chọta ụzọ ọ ga-esi meziwanye mmegharị ya na igbe ahụ.
Ndụ Wout Weghorst:
Ụzọ ndị na-agba ọsọ Dutch na-emepụta oge dị mma na ezinụlọ ya na-akọwa ụzọ ndụ ya. Ugbu a, ka anyị kwuo ihe Wout na-eme iji mepụta echiche nke ịbụ onye a.
N'oge ezumike okpomọkụ, ezinụlọ Wout Weghorst na-agakarị Ibiza. Ebe a, ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mbụ, dị ka ọ nweghị ebe ọ bụla n'ụwa. Nke a bụ Nikki, Wout, Juul na Lucie na-ekpori ndụ na ọdịdị nne.
N'oge ezumike okpomọkụ, Wout Weghorst ezinụlọ na-eleta Ibiza.
Dịka oge okpomọkụ, ezumike oyi bụkwa oge pụrụ iche maka ezinụlọ Dutch bara ọgaranya. Ebe ezumike kacha mma n'oge ezumike oyi bụ Australia. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ezinụlọ Wout na-eme egwuregwu Alpine.
Oge ezumike oyi bụ oge pụrụ iche maka Wout na ezinụlọ ya. Ha na-emefu ya na Australia ma nwee mmasị isonye na egwuregwu Alpine.
Ndụ Ezinụlọ Wout Weghorst:
Onye ọ bụla n'ime ezinụlọ ya na-arụsi ọrụ ike ma na-arụsi ọrụ ike. Malite na papa ya, mama ya na ụmụnne ya. Ha niile agbaala mbọ ike iji wuo alaeze mmanụ na gas. Akụkụ a nke Bio anyị na-agwa gị ihe gbasara ezinụlọ Wout. Ka anyị malite na Frans, nna ya.
Wout Nna Weghorst:
Nna onye egwuregwu bọọlụ, Frans, na-azụ ahịa ahịa mmanụ na-aga nke ọma na Borne, Netherlands.
Nna Wout's Weghorst, Frans nwere AVIA Weghorst ugbu a. Azụmahịa ahịa mmanụ etoola nke ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nna nna Frans Weghorst chọtara ụlọ ọrụ mmanụ na gas.
Ọrụ nna Wout Weghorst na bọọlụ:
Ewezuga ịbụ onye mogul mmanụ na gas, Frans Weghorst nwekwara mmasị na njikwa egwuregwu bọọlụ.
N'otu oge, ọ na-agba ọsọ maka ọkwa General Manager maka FC Twente. Nke a mere mgbe bọọdụ klọb ahụ na onye bụbu CEO Eric Velderman kewara ụzọ.
Frans Weghorst etinyeghị akwụkwọ maka ọrụ ahụ n'ihi na o nwere ahụmahụ football. Kama, o mere nke ahụ n'ihi na o nwere obi Twente. O mere ka a mara ebumnuche ya na ọ naghị achụ ego dịka ọ bara ọgaranya, na dabere na ego.
Ka emechara, akụkọ bịara na nna Wout Weghorst abanyela na Supervisory Board nke FC Twente. Site na ntinye nke Frans Weghorst n'ọrụ ahụ, Board Supervisory nke Twente nwere mmadụ atọ. Ndị a bụ Dennis Schipper na Koen Groenewold.
Otu n'ime ọrụ Frans maka FC Twente bụ inye klọb ahụ atụmatụ nnapụta ego. Nke a bịara n'oge klọb nwere nnukwu mkpa ego. Frans nyere aka site na De Noabers - ụlọ ọrụ ọ na-asụ ụzọ.
De Noabers dị na Grutbroek, 7008 AN Doetinchem, Netherland. Nke a bụ otu ndị na-etinye ego na mpaghara nke zọpụtara FC Twente site na ọgba aghara ego. N'ihi enyemaka Wout Papa, nzukọ ahụ tinyere ego ruru nde euro 14 na klọb ahụ.
Banyere Wout Weghorst Nne:
Astrid bụ onye isi na AVIA, azụmahịa ezinụlọ. O weghaara ihe n'azụ nwa ya nwoke n'oge mmalite nke mgba ya dị ka ndị na-agba ụkwụ.
Ndebanye aha Wout's Willem II agaraghị abịa na-enweghị enyemaka Astrid. Dị ka e chetara na mbụ, Weghorst's Mum bụ enyi na nwunye Jan van Esch, onye nduzi nke Willem II mgbe ahụ.
N'oge ahụ, onye na-eto eto nwetara ohere ka a nyochaa ya n'ihi mmekọrịta nne ya na ezinụlọ van Esch.
Banyere Wout Weghorst Brothers:
Ndị na-agba bọọlụ Dutch na-ewere ụmụnne ya dịka ezigbo ndị enyi ya. Nke a na-akọwa ihe mere ha ji nwee njikọ siri ike.
Wout na-ekwukarị na ya enwebeghị enyi n'ezie. Na ọ na-enwe nnukwu nsogbu na nke ahụ. Ọ dịghị mgbe ọ nọ n'ebe ọ bụla, ọ na-anọkwa nanị ya mgbe nile. Ugbu a, ka anyị gwa gị banyere ụmụnna nwoke nke Dutch football giant.
Banyere Twan Weghorst:
Foto dị n'okpuru ebe a, ọ bụ nwa mbụ Astrid na Frans. Ọ bụkwa nwanne Wout Weghorst nke tọchara.
Dị ka nyocha anyị si kwuo, Twan Weghorst bụ onye na-anya ụgbọ elu nke na-anya ụgbọ elu Boeing 737. Ọ na-egosi na ọ chụpụrụ ụgbọ elu ndị ọzọ - dị ka Emirate na KLM Royal Dutch wdg Twan nwere njikọ siri ike na Astrid, mama ya.
Wout Weghorst nwanne, Twan, bụ onye pilot.
Tupu ịghọ onye ọkwọ ụgbọ elu, Twan Weghorst gbalịrị aka ya na football. Nnyocha na-egosi na nwanne nwoke nke okenye nke Wout na-egwuri egwu maka RKSV NEO tupu ọ kwụgidere akpụkpọ ụkwụ ya. Na njedebe ikpeazụ, Twan Weghorst lụrụ Lieke Velner.
Nke a bụ Lieke Velner. Ọ bụ nwunye Twan.
Banyere Ralf Weghorst:
Ralf bụ nwa nwoke nke abụọ nke Astrid na Frans - nne na nna ya. Ọzọkwa, ọ bụ onye a ma ama maka ịbụ nwanne nwanne Wolf Weghorst nke tọrọ ya ozugbo. N'ihe gbasara ọrụ ya, Ralf Weghorst bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Eziokwu ọzọ banyere Ralf bụ ịhụnanya ya maka nri.
Banyere Niek Weghorst:
Dabere na AVIA, ụlọ ọrụ ezinụlọ, Niek Weghorst bụ otu n'ime ndị isi njikwa ha. Nwanne Wout nke obere bụ onye isi azụmaahịa nke ụlọ ọrụ mmanụ na gas.
Anyị na-ese foto ebe a ka ya na nna ya (Frans Weghorst) na-enyocha ụlọ ọrụ. Na Niels Seinen, onye nduzi ibe. Ị chọpụtala?... Niek nwere ihe yiri nna ya karị.
Niek Weghorst bụ onye isi na AVIA.
Wout Weghorst's Brother, Niek, bụ ọkachamara n'ahịa mmanụ na gas. O meela ndụ ya niile maka azụmahịa ezinụlọ ya. Ọ bụ nwa ikpeazụ nke Frans na Astrid - nne na nna ya.
Ndị nne na nna ochie Wout Weghorst:
N'ime izu ole na ole ka amuchara Juul (ada mbụ Wout), nne nne ya rịọrọ ka ọ hụ ya. Ịhụ nwa nwa ya na-ewetara ya ndụ ọhụrụ. Nke ka nke, ọ na-eme ka ọ dị Wout ka ọ bụ nna na-eme nke ọma n'ezie.
Nne nne Wout Weghorst tụrụ n'anya ịhụ nwa nwa ya nke mbụ.
Ndị ikwu Wout kacha njọ:
Na nkezi ịgba bọọlụ Satọde, ị nwere ike ịhụ ihe dị ka iri Weghorst sions na-aga Germany. Ha na-aga ebe ahụ ikiri egwuregwu Wout's Wolfsburg.
N'ime ndị a maka njem a bụ ndị ikwu Wout Weghorst - ụmụ nwanne ya na ụmụnne ya. Ụmụnne na nne na nna Baller bụkwa ndị dị mkpa na njem ahụ.
N'ime ndị ikwu Wout Weghorst, nne di ya na-abịakarị eleta ezinụlọ ya. Ya na nwa ya nwanyị, Nikki Van Esch, bụ nwunye Wout nwere mmekọrịta pụrụ iche. Ma nwa nwanyị na nne na-enwe mmasị ịtụtụ mkpụrụ osisi.
Nke a bụ nne Nikki Van Esch. Nne di nke Wout.
Eziokwu Wout Weghorst ekwughị okwu:
Ka anyị na-emechi Biography of the 6 foot 6 Dutch Giant, anyị ga-eji akụkụ a gwakwuo eziokwu gbasara ya. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Eziokwu #1 - Akụkọ banyere AVIA, azụmahịa ezinụlọ Wout Weghorst:
Ọ malitere na 1931 mgbe coal na peat toro na Netherlands. Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, AVIA lekwasịrị anya si na kol na peat gaa na mmanụ ọkụ na-ekpo ọkụ.
Ka m na-ede Bio nke a, azụmahịa ezinụlọ na-elekwasị anya ugbu a na mmanụ ụgbọala mmiri mmiri. Ọ na-ebunye mmanụ ugbu a karịa 130 nke ọdụ ya na-ejuputa ya na ugwu, ọwụwa anyanwụ na etiti Netherlands.
Foto nke AVIA, azụmahịa ezinụlọ Wout Weghorst.
Ihe na-adọrọ mmasị karị banyere AVIA, ọgbọ nke anọ nke ezinụlọ Weghorst na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ọgbọ nke ise nke nwere ụmụ ụmụ Frans na Astrid ka a mụọlarị. Ruo ugbu a, anyị maara Juul na Lucie, ụmụ nwanyị Wout na Nikki Van Esch.
Eziokwu #2 - dike amaghi ama nke ntorobịa ya:
Ị chetụla onye bụ arụsị Wout Weghorst? Aha ya bụ Jari Litmanen. The Finish ex-striker egwuri n'okpuru Louis Van Gaal maka Ajax na FC Barcelona. Ọ gbakwara Liverpool egwu Michael Owen na Steven Gerrard. Wout zutere arụsị ya mgbe ọ bụ nwata.
Ozugbo arụsị ya, mgbe niile arụsị ya. Nke a bụ Jari Litmanen na Wout (tupu na ugbu a).
Eziokwu #3 - Wout Weghorst Tattoo pụtara:
Ogwe aka ekpe ya nwere atụmatụ okike yana nchikota egbugbu nwere okwu bara uru. Dị ka Wout si kwuo;
Ọ na-echetara m nzọụkwụ m mere na ndụ m na ọrụ m. Ha bụ akụkọ ndụ m.
Okwu a dị n'elu na-ezo aka na egbugbu Wout Weghorst na biceps ya. Nke a bụ akwara dị n'ihu akụkụ aka ekpe nke elu aka ekpe.
Ihe tattoos Wout Weghorst pụtara.
Egbugbu Wout niile nwere ihe pụrụ iche pụtara. Egbugbu ya abụghị naanị maka football. O nwere otu (nke jikọtara ya na ekpere dị nkenke) maka nne na nna ya (Ralf na Astrid) na ụmụnne ya. N'ikpeazụ, Wout nwere egbugbu maka ụmụ ya nwanyị (Juul na Lucie) na nwunye (Nikki Van Esch)
Eziokwu #4 - Wout Weghorst Salary:
Nke mbụ, ka anyị kwatuo ihe ọ na-anata na VfL Wolfsburg (dị ka nke 2022) - ruo nkeji nkeji.
Wout Weghorst ụgwọ ọnwa mebiri na VfL Wolfsburg (na Euro)
Kwa Afọ: € 3,004,599
Ọnwa kwa: € 250,383
Kwa izu: € 57,692
Kwa :bọchị: € 8,241
Oge Awa ọ bụla: € 343
Nkeji ọ bụla: € 5
Sekọnd ọ bụla: € 0.09
Kemgbe ịmalitere ilele Wout Weghorst's Bio, nke a bụ ihe ọ rụgoro na VfL Wolfsburg.
Eziokwu #5 - Wout Weghorst Net Worth:
N'ịgbakọ nke a, anyị tụlere afọ ya nke ahụmahụ football ọkachamara. Ọzọkwa, akụ ezinụlọ Wout Weghorst.
Na-agbakwunye abụọ ndị a ọnụ, anyị nwere atụmatụ nke 13.5 nde Euro. Nke ahụ bụ uru Wout Weghorst dị ka nke afọ 2022.
Eziokwu # 6 - Nkọwapụta Football:
Ụfọdụ na-akpọ Wout dị ka ndị Dutch Olivier Giroud ma na-enwekwu ijeụkwụ. O nwere àgwà ndị yiri ya Paul Onuachu (Onye egwu Naijiria) na Sebastien haller (Onye ọkpọ Ivory Coast).
Dị ka a chọpụtara site na stats FIFA ya, Wout Weghorst kachasị mma ma a bịa n'ike na ike ya. O nwekwara àgwà mwakpo na echiche dị ukwuu.
Eziokwu #7 - Mgbanwe na nghọta ọha:
N'otu oge, ndị Fans AZ nwere echiche na-adịghị mma banyere Wout. Agbanyeghị, echiche ọha gbanwere mgbe ha hụrụ ụdị ụdị Wout Weghorst enweghị atụ.
Dị ka akụkọ si kwuo, ọ pụtara na onye egwuregwu bọọlụ Dutch na-eleta onye ezumike nka mgbe niile n'ụlọ nlekọta n'oge ohere ya. Ugbu a, gịnị mere o ji leta ochie?
N'oge ahụ, Weghorst lere ihe omume banyere owu ọmụma n'etiti ndị agadi. O metụrụ ya n'ahụ. N’ihi ya, o kwere nkwa iwepụta awa ụfọdụ n’izu ya ileta otu agadi nwoke. Wout mere nke ahụ n'ime ọtụtụ ọnwa.
Ndị na-akwado AZ chọpụtara mgbe ihe ngosi TV gosipụtara na enyi ochie ya anwụọla. Ọrịa agadi nwoke ahụ na ọnwụ mechara kpasuru Wout nchegbu na iwe.
Mgbe o ruuru uju ọnwụ nwoke ahụ, Wout mere mkpebi. O kwuru na ya na onye ọ bụla kpọmkwem agaghị anọ oge ọzọ. Nke a bịara n'ihi egwu nke itinye oke mmetụta uche.
Eziokwu #8 - Wout Weghorst Liverpool Dream:
Ị maara?… Nnukwu 1.97m (6ụkwụ 6 sentimita asatọ) onye ọkpọ ọkpọ nwere nrọ England. Ọ bụghị ihe ọzọ karịa ọchịchọ ya igwu egwu Liverpool.
Dị ka e chetara na mbụ, Jari Litmanen (arụsị ya) na-egwuri egwu maka Reds. Nke ahụ nwere ike ịbụ ihe kpatara Wout ji kwado Liverpool mgbe ọ bụ nwata. Ọ kọwakwara ihe mere o ji rọrọ nrọ ịgbara ha egwu.
Eziokwu #9 - Okpukpe Wout Weghorst:
Ọkachamara onye egwuregwu bọọlụ Dutch amabeghị onwe ya dị ka akụkụ nke otu echiche. Otu ihe ahụ na-aga maka nne na nna ya na ụmụnne ya, dịka a hụrụ na profaịlụ mgbasa ozi ha. Ha na-esonye na 54% nke ụmụ amaala Dutch na-enweghị nkwenkwe okpukpe.
Tebụl a na-enye nchịkọta nke profaịlụ Wout Weghorst.
Aha n'uju: Wout Weghorst
Ụbọchị ọmụmụ: Ụbọchị 7th nke August 1992
Ebe amụrụ onye: Borne, Netherlands
Nationality: Mba netherland
Ndị nne na nna: Frans Weghorst (Nna) na Astrid Weghorst (Nne)
Ụmụnne: Twan Weghorst, Ralf Weghorst na Niek Weghorst
Nwunye: Nikki Van Esch
Children: Juul na Lucie Mary (Ụmụ nwanyị). Wout enweghị nwa nwoke dịka nke 2021
Ọrụ Twan Weghorst (Nwanne Kasị ochie): Pilot
Ọrụ Ralf Weghorst (Nwanne Okenye) ozugbo: Onye nhazi
Ọrụ Niek Weghorst (Nwanne Nta). Onye isi na azụmahịa ezinụlọ.
Ezinụlọ Ezinụlọ: ọnụ
Aha Azụmahịa Ezinụlọ: Ọnụahịa kasị elu nke AVIA
elu: 1.97 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 6 sentimita asatọ
Ezigbo Net: 13.5 nde Euro (2021 stats)
Onye nnọchite anya: Simon Cziommer
Education: BSc na nchịkwa azụmahịa. Ọkwa ọzọ na Top Sports Management & Entrepreneurship.
Ihe akara Zodiac: Leo
Religion: Ndị na-abụghị okpukpe
Wout Weghorst's Biography bụ akụkọ banyere otu nwa nwoke si n'ụlọ bara ọgaranya nke lụrụ ọgụ niile iji chụọ nrọ ọ na-ejidesi ike. Yiri Jamie Vardy, o si na omimi nke Dutch football bilie ruo n'elu. Ọ họọrọ ịgbaso obi ya ma ọ dịghị mgbe ọ gere ntị n'echiche ịkwụsị.
Ọ dị mkpa ịmara na nne na nna Wout Weghorst bụ ọtụtụ nde mmadụ. Ezinụlọ ya bụ ndị nwe mpako nke AVIA Weghorst. Nke a bụ ụlọ ọrụ mmanụ na gas ama ama na Netherlands. Wout anaghị ele akụ na ụba nne na nna ya anya. Ọ chọrọ ndụ - dị nnọọ iche na ndị ọzọ.
Mgbe ọ bụ nwata, nne na nna Wout Weghorst gosipụtara nchegbu banyere ya. Astrid na Frans nwere nchegbu banyere mkpebi ya ịchụ ihe ha kpọrọ nrọ na-agaghị ekwe omume. Ha chọrọ ka Wout họrọ ọrụ a ma ama karịa. Dị nnọọ ka ihe ụmụnne ya họọrọ ịbụ na ndụ.
Twan, nwanne ya nwoke nke tọrọ, kwere nkwa ịghọ onye ọkwọ ụgbọ elu. Niek Weghorst, onye isi ya, kwetara ka ọ bụrụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Onye ikpeazụ sitere na ezinụlọ (Niek) kwere nkwa ilekọta azụmahịa ezinụlọ ha. N'ikpeazụ, Wout gbasoro football yana nweta akwụkwọ.
Obi ike n'ihu ihe ịma aka:
Ndị na-egwu egwuregwu Dutch malitere football na NEO. Ọ kwagara DETO - dịka onye ọkpụkpọ nkezi. Ọtụtụ ndị nwere ezi obi gbara ya ume ka ọ kwụsị ịgba bọọlụ. Ha gwara ya na ya adịchaghị mma. Nwatakịrị Lad ahụ siri ike ma ọ dịghị mgbe ọ gere ntị na ndụmọdụ ha.
Nne Weghorst (Astrid) guzoro n'akụkụ nwa ya nwoke na nsogbu nke mmalite ọrụ ya. O nwetara ohere nye Willem II site na enyi ya. Mmụba uto metụtara afọ iri na ụma Wout, bụ́ nke ọ meriri. Ọzọ wetara nkatọ sitere n'aka ndị na-akwado ya, nke ọ meriri.
N'ikpeazụ, ndị Dutch footballer nwetara meteoric top-flight football ịrị elu - yiri nke ahụ gbara akaebe Armando Broja na England. Wout Weghorst's Biography na-eme ka anyị ghọta eziokwu ahụ mbanye dị mkpa karịa talent. Erik ten Hag na-egosipụtakwa nke ahụ.
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ akụkọ ndụ Wout Weghorst. Na Lifebogger, anyị na-eche maka izi ezi na izi ezi na usoro ihe omume anyị na-ebu kwa ụbọchị Akụkọ banyere football Dutch.
Biko jiri ibe kọntaktị anyị mee ka anyị mara ma ị hụrụ ihe ọ bụla na-adịghị mma na Wout Weghorst Bio. Anyị ga-enwekwa ekele maka echiche gị gbasara ndị na-agba bọọlụ na ngalaba nkọwa. Na ndetu ikpeazụ, nọrọ na nche maka akụkọ bọọlụ ndị ọzọ sitere na Lifebogger.
Akụkọ nwata Sven Botman gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Nwere ike 23, 2022